Didier Drogba dia nahazo fandresena lehibe tamin'ny fizahan-tany ho an'i Côte d'Ivoire
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Didier Drogba dia nahazo fandresena lehibe tamin'ny fizahan-tany ho an'i Côte d'Ivoire
Ny kintan'ny baolina kitra iraisam-pirenena Didier Drogba dia nanampy ny toerana nahaterahany, Côte d'Ivoire, mitokona volamena amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny fanangonana MOUs amin'ny volavolan-dalàna mitentina $ 15 miliara hamerenana ireo tetik'asa fizahan-tany any amin'ny firenena afrikanina andrefana.
Ny fandrosoana dia mialoha ny Forum de l'Investissement Hotelier Africaain (FIHA) manan-kery, izay atao any Abidjan amin'ny volana ambony (23-25 ​​martsa). FIHA dia fantatra amin'ny fahaizany mampifandray ireo mpamatsy vola vaovao amin'ny mpamorona, mpanolo-tsaina, mpifanaraka, mpandraharaha amin'ny hotely ary mpitarika politika.
Ny taloha Chelsea mpikomy - ary masoivoho eran'izao tontolo izao misahana ny fizahan-tany - dia anisan'ny fanentanana mahomby manerantany hampiroborobo ny fahombiazan'ny toekarena any Côte d'Ivoire izay mihamitombo. Mampirehareha ny tahan'ny fitomboan'ny harinkarena faobe 8% amin'ny taona 2019 ary, ho toeran-kaleha, eo amin'ny laharana fahatelo any Afrika Atsimon'i Sahara izy, miaraka amina mpitsidika iraisampirenena 2 tapitrisa, ao aorinan'i Afrika atsimo sy Zimbabwe, mialoha an'i Oganda, Botswana, Kenya na Maurice. (araky ny angona UNWTO 2018).
Eo ambanin'ilay sora-baventy, Sublime Côte d'Ivoire, Didier Drogba dia mpilalao fototra tao amin'ny ekipa manana ny maha izy azy ny mpitarika sy ny mpitarika politika ivoariana, ary koa ireo olona misehoseho amin'ny fisehosehoana, izay nandeha amoron-dàlana nankany Dubai sy Hamburg. Niverina izy ireo niaraka tamin'ny fanoloran-tena maherin'ny 15 miliara dolara ho an'ny tetik'asa fizahan-tany isan-karazany, manomboka amin'ny trano fandraisam-bahiny, hatrany amin'ny toeram-pialofana sy ny fampandrosoana ny morontsiraka. Ny mpanohana rehetra dia nasaina hanatrika FIHA.
Philippe Doizelet, mpitantana ny Horwath HTL, dia nitarika ny ezak'i Côte d'Ivoire. Hoy izy: “Pejy banga izay azon'ny indostria soratana amin'ny fomba mahaliana indrindra. Betsaka ny zavatra tsy maintsy hatsangana - trano fandraisam-bahiny eo akaikin'ny ivon-toeran'ireo kolotsaina sy ireo fotodrafitrasa fihaonambe, ankoatry ny zavatra hafa. Ny morontsiraka mahatalanjona dia manolotra fotoana 'fialamboly' (fifangaroan'ny asa aman-draharaha sy fialamboly) lehibe. Beyond Abidjan; Ny nosy Boulay, Bassam ary Jacqueville no toerana tena mampisy fanantenana ankehitriny. ” Hitany ny mety lehibe indrindra amin'ny tetikasa 'mifangaro-mampiasa', mampifangaro ny voly fialan-tsasatra, birao ary fivarotana antsinjarany, indrindra fa hotely kintana 2 sy kintana 3 misy trano sy trano hipetrahana maharitra.
Mitarika ny hetahetam-pirenena hahatonga ny fizahantany ho iray amin'ireo andrin'ny toekarena indrindra dia ny minisitry ny fizahantany Siandou Fofana. Nosoratan'i Philippe Doizelet ho toy ny “mpahita fahitana ary tena nanolo-tena tanteraka. Miasa mafy izy hampivondrona ny olona ary hisarihany ireo manam-pahaizana tsara indrindra. ”
Ny valanaretina Coronavirus any Alemana
CTO: Mila ny revolisiona fahaiza-manao mba hitazomana ny fifaninanana fizahan-tany any Karaiba
Vaovao momba ny dia any Nepal
Nampiato ny sidina iraisam-pirenena sy an-toerana i Nepal noho ny fahatezeran'ny COVID-19